तपाईं Apg29 येशूले साक्षी गर्न चाहनुहुन्छ भने? | Apg29
आफ्नो गवाही, लिखित, भिडियो वा अडियो फाइल पेस
तपाईं अन्य मानिसहरूलाई येशूको बारेमा बताउन चाहनुहुन्छ? के तपाईं सुरक्षित भयो हामीलाई कसरी बताउन हुनेछ? त्यसपछि तपाईं Apg29 मा यो गर्न सक्नुहुन्छ!
Apg29 ब्लग साइट हो येशूको पुष्टि गर्छ कि। मान्छे भ्रमण गर्दा यो येशूले कसरी स्वीकार गर्न र सुरक्षित हुन सिक्न सक्षम हुनेछ उद्देश्य छ।
वर्षौंदेखि धेरै येशूले स्वीकार गरेका छन् र भ्रमण गर्ने ब्लग साइट Apg29.nu सुरक्षित गरिएको।
येशूको मुक्तिको सन्देश, ओझेलमा, त्यसपछि Apg29 यसको समारोह भर्न गर्छन् थियो छैन र यसको raison d'être गुमाएको छ।
यसबाहेक, म मेरो व्यक्तिको पेशा दुरुपयोग र इंजीलवादी येशूले मलाई के आज्ञा छ गरेका छन्।
म म येशू पाएको द्वारा सुरक्षित थियो, त्यसपछि म सधैं तपाईं प्रभु बचत गर्न येशू स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर होसियार गरिएको छ। यो बाइबल पनि सिकाउँछ के छ:
"तर रूपमा प्राप्त उहाँलाई [येशूले] धेरै, तिनीहरूलाई उहाँले आफ्ना नाममा विश्वास तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान गर्ने अधिकार दिनुभयो।" - यूहन्ना 1:12
तपाईं येशूको बारेमा बताउन चाहनुहुन्छ अन्य मानिसहरूलाई? के तपाईं सुरक्षित भयो हामीलाई कसरी बताउन हुनेछ? त्यसपछि तपाईं Apg29 मा यो गर्न सक्नुहुन्छ!
मलाई आफ्नो गवाही पठाउन christer@apg29.nu । कृपया हामीलाई पहिले नै YouTube सहित वेब, मा छ भिडियो गर्न भनेर भिडियो, वा लिंक पठाउन।
एक पटक अनुमोदित, म यसलाई प्रकाशित हुनेछ। मान्छे सुन्न आवश्यक र तपाईं सुरक्षित र प्रभु येशू भेट थिए कसरी आफ्नो गवाही पढ्न।
Bönesidan अब र पहिले नै लगभग एक हप्ताको लागि चलिरहेको छ 147 bönämnen । मान्छे पीडित र आवश्यकता हो। तपाईंको bönämne पेश गर्नुहोस्। त्यहाँ bönesidan आगंतुकों गर्ने सोध्न धेरै छन्।
त्यहाँ 13 हो ब्लग लेख को पुन सुरूवात देखि प्रकाशित गर्न व्यवस्थित छन् र पहिले नै त्यहाँ 106 टिप्पणी गरिएको छ कि। पनि टिप्पणी!
तपाईं त्यहाँ त तपाईं येशू प्राप्त तपाईंको टिप्पणी कसैले रोक्न छैन येशूले केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर टिप्पणी गर्दा बस सम्झना।
त्यस्तै, यो bönämnen संग हुनुपर्छ। त्यसैले तपाईँ आफ्नो bönämnen मानिसहरूले येशूलाई स्वीकार गर्न र सुरक्षित हुन रोक्न संग हुनुहुन्छ।